राम्रो काम गरे सरकारको प्रसंशा गर्न छोडिन्न Canada Nepal
राम्रो काम गरे सरकारको प्रसंशा गर्न छोडिन्न
क्यानाडानेपाल डेस्क कार्तिक २७ २०७७
-केही महिना अगाडि खतिवडा सरले पुस्तक आयातमा समेत कर लगाउनुभो ! केही पत्रकार मित्रले विभिन्न तर्क दिएर त्यसको बचाउ र समर्थन गर्नुभो ।
तर आज त्यो कर हटाएकोमा विष्णु पौडेल र केपी ओलीलाई ज्ञानविज्ञानवादी भन्दै लामालामा वाक्यमा बधाई लेख्नेमा त उहाँहरू नै अगाडि हुनुहुँदो रहेछ ! चिन्नुहुन्छ ?
-कृषिमन्त्री घनश्याम भूसालले मल नल्याउने ठेकेदारलाई कारबाही गरेको भनेर प्रसंशामा स्ट्याटस लेख्ने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो । तर कहिल्यै मलको कारोबार नै नगरेका र हरेक ठेक्कामा बदमासी गरेका घरबेटीले नै मल ल्याउने ठेक्का किन र कति कमिशनमा पाएका थिए भन्ने उहाँहरूले लेख्नुभएन । थप दिग्दारी त के छ भने, अझै पनि मलको ठेक्का उनैसँग छ । अनि धरौटी जफत भएको समाचार नि ? भन्नुहोला, त्यो सही हो ।
मलमा करोडौंको अनुदान छ । ठेक्काको मोबिलाइजेशन भनेर २०-२५% पहिल्यै झिक्न र बाँड्न पाइन्छ । मल ल्याउनुपर्दैन । अनि सरकारले दुई तीन लाख धरौटी जफत गरेको र ठेक्का तोडेको अभिनय गर्छ, सकियो । ठेक्का दिने पनि आफै, पाउने पनि आफै, अनुदान पड्काउने पनि आफै, मल नल्याउने पनि आफै, कारबाही गरेको अभिनय गर्ने पनि आफै अनि बाँकी ठेक्का पनि आफ्नै ।
धान रोप्ने बेला मल आएन । धरौटी जफत भन्ने समाचार आयो । कहिल्यै नसुनिएको मल पैँचो माग्ने खबर आयो । अहिले गहुँ छर्ने बेला फेरि मल आएन । समाचार आयो, मल नल्याउने त फेरि पनि त्यही ठेकेदार रहेछ । मल त पक्कै आउने छैन तर फेरि कारबाहीको खबर भने आउनेछ र सरकारको फेरि प्रसंशा गर्न भने पाइने नै छ । जय होस् ! - नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट
कार्तिक २७, २०७७ बिहिवार १९:२२:०२ बजे : प्रकाशित
नेकपा कार्यकर्ताको नाममा दुई शब्द !
मंसिर ४, २०७७ बिहिवार १८:४१:२६ बजे : प्रकाशित
ओलीज्यू, प्रचण्डलाई चिठ्ठी लेखेजस्तै एकपल्ट जनतालाई पनि चिठ्ठी लेखेर बताइदिनुहोस् न !
ओलीजी, तपाईंमाथि भ्रष्टाचारका आरोप प्रचण्ड या तपाईंकै पार्टीको सचिबालयले मात्रै लगाएको होइन ।
- महामारीदेखि आर्थिक सङ्कटसम्मका विषयमा हरेक दिन सिंहदरबारका बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने व्यक्ति बालुवाटारमैं बसेर दिनहुँ पार्टीको भागबण्डामा षड्यन्त्र बुन्दै बस्ने कहिलेसम्म ?
- र, चाडबाडमा देशका मुख्य मन्दिर र स्कुलहरू बन्द गरेर आमसभा गर्दै आत्मप्रसंशाको भाषणमा रमाउने कहिलेसम्म ?- नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट
मंसिर १, २०७७ सोमवार ०७:३१:२५ बजे : प्रकाशित
कोरोना संक्रमण मुक्त भेषराज पोखरेलको सुझाव : यी नियमहरुको पालना गरे, आफन्तले चिरशान्तिको कामना गर्नु पर्दैन
भेषराज पोखरेल । न सरकारले सोच्यो न हामीले सोच्यौं यति भयावह अवस्था आउला भनेर! यो त शुरूवात मात्रै जस्तो छ। अझै कति विकराल अवस्था आउने हो? हिजोसम्म निर्धक्क भएर मलाई केही हुन्न भन्नेहरूको पनि ओठमुख सुक्न थालिसकेको छ मलाई जस्तै।
म कोरोना प्रतिरोध गर्न सक्षम भनाउँदोको पनि मन स्थिर छैन। एउटा अदृश्य डरले पुरै मस्तिष्कलाई लथालिङ्ग बनाइ दिएको छ। कल्पनानै नगरेका आफन्त र साथीभाइहरूको अकाल अनि भयानक अन्त्यको खबरले परिस्थिति विकराल नै भइ सकेको अनुभूत गराउन थालेको छ! बरु म आफू संक्रमित हुँदा यति डराएको थिइनँ जति दिनहुँ छापिने मृत्युका कठोर प्रहारहरूको समाचारहरूबाट डराएको छु!
आफूलाई आइपर्ने दुर्घटनाको आभासले भन्दा पनि समाजमा भइ रहेको दुर्घटनाको त्रासले मन आक्रान्त हुन पुगेको छ। नसम्झिन खोज्दा पनि बाध्य छु युरोप र अमेरिकाको आततायी नरसंहार अनि सामुहिक चिहानका डरलाग्दा परिदृश्यहरू।
म चिकित्सा क्षेत्रको विशेषज्ञ त होइन नै तर मेरो अनुभवजन्य परामर्शले समाजमा आशाको किरण छर्न सक्छ भन्ने कुरामा शतप्रतिशत विश्वस्त छु। कोरोनाले कुनै पनि मानिसमा प्रवेश गरेपछि शुरुको ४/६ दिन नाक र घाँटीलाई मात्रै आफ्नो आश्रय स्थल बनाउने रहेछ। यो अवधिमा कसैमा सामान्य लक्षण देखिने, कसैमा लक्षण नै नदेखिने र कसैमा जटिल लक्षण पनि देखिने हुँदो रहेछ।
यदि शुरुवाती ६ दिनभित्र हामीले वरदान स्वरुप प्राप्त गरेको घरेलु जडिबुटीको भरपुर उपयोग गर्न सक्ने हो भने कोरोनाको असर कमिलाको टोकाइ बराबर पनि नहुने रहेछ। तर जब शुरुवाती दिनमा हामी लापर्वाह हुन्छौ र मलाई केही भएको छैन , यो जाबो कोरोनालाई त म यत्तिकै पचाइ दिन्छु भन्ने दम्भले दबाउन खोज्छौँ तब हामी आफ्नै चिहान खन्ने काममा लाग्दा रहेछौँ।
२) आँखा पोल्ने, दुख्ने, बिझाउने या सामान्य असजिलो अनुभव मात्रै भएमा पनि तातोपानी (खाने कपुर, असुरोको पात, तुलसीको पात र नून सहित) को वाफ दिनमा कम्तीमा ३ पटक नियमित लिने गरौँ।
५) काँडापानी बनाउँदा सक्खर (गुण), तुलसी, ज्वानो, जिरा, दालचीनी, टिम्मुर, र अदुवाको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाऔं।
(लेखक भेषराज पोखरेल प्राध्यापक तथा शिक्षावीद हुन्)
कार्तिक २६, २०७७ बुधवार २०:००:५५ बजे : प्रकाशित
# भेषराज पोखरेल
भुटानले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा कसरी सफलता पाएको छ ? - डा. रवीन्द्र पाण्डे
काठमाडौं - नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको समयमा डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण र यसबाट बच्ने बिभिन्न उपायहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिइरहेका छन् ।
यस्तै आज पनि डा. पाण्डेले भुटानले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न के कारणले सफल भयो भन्ने बारे जानकारी दिएका छन् ।
भुटानमा हालसम्म ३६४ जना संक्रमित भएका छन् । ती मध्ये ३४३ जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने २१ जना आइसोलेसन केन्द्र तथा अस्पतालमा छन् । भुटानमा आजसम्म एकजना व्यक्तिको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छैन । भुटान कोरोना महामारीको सुचिमा १८६ औं स्थानमा छ।
जब चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमण फैलियो, भुटानले त्यो समयदेखि नै सतर्कता अपनाउन सुरु गर्यो। भुटान आउने सबै व्यक्तिलाई बिमानस्थलदेखि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर २१ दिनसम्म स्तरीय क्वारेन्टाइनमा निशुल्क राख्यो । उनीहरुलाई कम्तिमा ३ पटकको परिक्षणमा कोरोना संक्रमण नेगेटिभ देखिएपछि होम वा होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने तथा सरकारले निरन्तर अनुगमन र निगरानीमा राख्ने काम गर्यो । हरेक संक्रमितको केहि घण्टाभित्र नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग गरेर क्वारेन्टिनमा राख्ने तथा पटकपटक परिक्षण गर्ने गर्यो।
भुटानले भबिष्यमा कुनै महामारी आए के गर्ने भनेर चीनमा गत बर्ष महामारी नियन्त्रण अभ्यासको तालिम लिएको थियो । चीनले सन् २००२- २००३ मा सार्स नियन्त्रण गरेको अनुभव सिकेर पारो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रिल अर्थात नक्कली महामारी अभ्यास गरेको थियो । यस्ता अभ्यासले आपतकालीन तयारीलाई मार्ग निर्देश गर्छन्। त्यसै गरि भुटानले सबैभन्दा खराब अवस्थाको आंकलन गरेर अस्पतालदेखि आइसोलेसन सेन्टरलाई स्ट्याण्ड बाइ राखेको छ । भुटानका होटेल तथा अन्य संस्थाले आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने नागरिकलाई निशुल्क खाना तथा आवासको ब्यबस्था गर्ने प्रण गरे र त्यहि अनुसार सेवा दिइरहेका छन् ।
भुटानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै नागरिकको स्वास्थ रेखदेख तथा उपचार गर्ने जिम्मा लिएको छ । भुटानमा स्वास्थ्य सेवा सबै निशुल्क छ। कुनै पनि डाक्टर वा अस्पतालले नागरिकबाट शुल्क लिन पाउदैनन् । देशको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तथा संबिधानमा स्पष्ट भनिएको छ – राज्यले आधुनिक र परम्परागत औषधि दुबैमा आधारभूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क पहुँच प्रदान गर्नेछ। भुटानले स्वास्थ्य सेवाको समान वितरणमा ध्यान दिएको छ ।
लकडाउनको कारण बिभिन्न देशमा फसेका आफ्ना नागरिकलाई भुटानले चार्टर फ्ल्याइटबाट आफ्नै देशमा ल्यायो । भुटानले संक्रमित पहिचानको लागि विद्यालयका शिक्षक, ग्रामिण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुरक्षा , स्थानीय निकाय तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ब्यापक परिचालन गरिरहेको छ । सिमानामा अस्थायी आवास निर्माण गरेर सिमाबासी तथा भुटान बस्न चाहाने भारतीय मजदुरलाई सुरक्षित रुपमा राखेको छ । सिमानामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ ।
भुटानका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री जनस्वास्थ्य तथा चिकित्साको पृष्ठभूमि भएका बिज्ञ हुन् । यो महामारीको बेला भुटानले कुनै पनि नागरिकलाई आर्थिक कठिनाइ हुन् नदिने नीति लिएको छ । परिक्षण, उपचार, खाना, आबास लगायत आधारभूत आवश्यकता हरेक नागरिकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै भुटानले मास्क, पन्जा, फेस शिल्ड, चस्मा लगायतका सामग्री हरेक जनतालाई निशुल्क वितरण गरिरहेको छ । भुटानका राजालाई त्यहाँ आदर्शको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले त्यहाँ भ्रष्ट्राचार, ढिलासुस्ती पटक्कै छैन ।
महामारीको समयमा राष्ट्रिय एकताको दृढ भावना समाजका सबै वर्गले प्रदर्शन गरिरहेछन्। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने वर्गलाई स्वयंसेवीहरुले गुणस्तरीय खानपिनको ब्यबस्था गरेका छन्। हरेक ब्यबसायीले महामारी नियन्त्रणको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सरकार तथा नागरिकलाई सहयोग गरिरहेका छन् । मास्क, दुरी तथा सरसफाईलाई सबै जनताले जीवनशैली बनाएका छन् । भुटानले देशका ५४ ठाउँमा ‘ फ्लु क्लिनिक ‘ संचालन गरियो । ज्वरो तथा रुघाखोकी लागेका हरेक व्यक्तिको पिसिआर तथा छातीको एक्स रे गर्ने काम गरियो। परिक्षणबिना सहर र गाउँमा आवतजावत बन्द गरियो ।
भुटानले यो महामारीको समयमा चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रिवितरण तथा सेवन नियन्त्रणमा ठूलो सफलता हासिल गर्यो ।त्यस्तै यो महामारीको अवधिलाई भुटानले कृषि तथा पशुपंक्षी पालनलाई निकै प्राथमिकता दियो । कोरोना महामारी सुरु भएपछि भुटानले मार्च २२ देखि भारतसंगको बोर्डर बन्द गर्यो ।भारतमा लकडाउन सुरु भएको थियो । यो संगै भुटानमा खाधान्न अभाव देखियो । भुटानले भारतबाट खानेकुरा ठूलो मात्रामा आयात गर्थ्यो। त्यसपछि भुटानले कृषकलाई शुन्य ब्याजमा कृषि ऋण, बिउ, मल, प्रबिधि आदि हस्तान्तरण गर्यो । कृषि तथा पशुपंक्षीमा आत्मनिर्भर हुनको लागि किसानले उत्पादन गरेको खाधान्न बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्यो । फलस्वरूप अहिले भुटान खानेकुरामा आत्मनिर्भरको बाटोमा हिंडिरहेको छ ।
भुटानले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको लागि अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थासंग समन्वय गरेर पुरै खोप आउनासाथ सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति गरेको छ । यसरी भुटानले सिमाना शिल, परिक्षण, प्रभावकारी कन्ट्याक ट्रेसिंग, उच्च सेवासहितको क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन, अस्पतालको क्षमतावृद्धि, ब्यापक मनोपरामर्श, व्यवसायीलाई राहत तथा निशुल्क सेवा प्रदान गरेर विश्वमै नमुना साबित भएको छ ।
कार्तिक २६, २०७७ बुधवार १८:२२:१७ बजे : प्रकाशित
यस्तै डा. पाण्डेले कोरोना संक्रमणको अवस्थामा खोप निर्माणको पछिल्लो अवस्था बारे बताएका छन् ।
अमेरिका र जर्मनीको संयुक्त प्रयासमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप निर्माण गरिरहेको फाइजर र बायोंटेक कम्पनीले विश्वका ६ देशका ५३ हजार ५०० मा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्र्याल गरेको थियो। यो परिक्षणमा ९० % सफलता हासिल गरेपछि अमेरिकी र जर्मनी बैज्ञानिक निकै उत्साहित बनेका छन् ।
अमेरिका, जर्मनी, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, साउथ अफ्रिका र टर्कीमा ४३,५०० जनामा ३ हप्ताको अन्तरमा यो खोपको २ डोज लगाइएको थियो । दोस्रो खोप लगाएको ७ दिनपछि कोरोना भाइरसविरुद्धको एन्टिबोडी देखिएको बिबिसीले जनाएको छ ।
सुरुमा खोप लगाएका ९४ जना व्यक्तिको अध्ययनबाट यो निष्कर्ष निकालिएको हो | सबै तथ्यांकको विश्लेषण बाँकी रहेकोले यो फाइनल रिपोर्ट नभएको फाइजर र बायोंटेकका अधिकारीले बताएका छन् । सबै रिपोर्ट अध्ययन गरेपछि खोपलाई आबश्यक परिमार्जन गरिने जानकारी दिइएको छ । कम्पनीले डिसेम्बरसम्म आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति पाउने आशा गरेको छ ।
फाइजर तथा बायोंटेकले नोभेम्बेरको तेस्रो हप्तासम्म नियामक निकायमा तथ्यांक पेश गर्नेछन । त्यहांबाट प्रमाणित भएपछि मात्र खोपको अभियान सुरु हुन्छ । सुरुमा खोप सानो जनसंख्याको लागि बिभिन्न देशमा पठाइनेछ। त्यो खोप जेष्ठ नागरिक, दीर्घबिरामी, बालबालिका, सुत्केरी, अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीलाई दिइनेछ । ठूलो संख्यामा उत्पादन भएपछि मास भ्याक्सिनेसन गरिनेछ ।
यो खोपले कति लामो समयसम्म काम गर्छ भन्ने कुरा खोप लगाएपछि थाहा हुनेछ । यसले केहि महिना काम गर्न पनि सक्छ, एक बर्ष काम गर्न पनि सक्छ तथा लामो समय काम गर्न पनि सक्छ । यी कम्पनीले घटीमा एक बर्ष खोपले काम गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । यसको ठूलो मात्रामा उत्पादन, भण्डारण र परिवहनमा केहि कठिनाइ देखिएको छ । यो खोपलाई माइनस असि डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
कोरोना भाइरसको अनुबांशिक कोडलाई मानब शरीरमा खोप लगाएपछि यसले हाम्रो इम्युन प्रणालीलाई तालिम दिन्छ साथै टि सेलमार्फत कोरोना भाइरससंग लड्दछ ।
यो बर्षको अन्त्यसम्ममा ५० करोड र २०२१ को अन्त्यसम्म करिब १.३ अर्ब डोज आपूर्ति गर्न सक्षम हुने फाइजर र बायोंटेकले जनाएका छन् । प्रत्येक व्यक्तिलाई दुई डोज आबश्यक पर्नेछ ।
यो खोपको साथै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले अनुसन्धानले गरेको तथा एस्ट्राजेनेकाले निर्माण गरिरहेको खोप, अमेरिकाको मोडेर्ना ल्याबको खोप, चीनका ३ वटा खोप ( सिनोफाम, कान्सिनो, सिनोभ्याक ) पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
रुसको ग्यामेलिया इन्स्टिच्युट र भेक्टर इन्स्टिच्युटले तेस्रो चरणको परिक्षण गरिरहेका छन् । तेस्रो चरणको परिणाम आइनसके पनि चीन र रुसले सिमित संख्यालाई खोप दिइरहेका छन्।
नेपालले पर्याप्त खोप पाउन अझै ५-६ महिना लाग्ने देखिएको छ । त्यो बेलासम्म अनिबार्य रुपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अबलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
कार्तिक २५, २०७७ मंगलवार १८:२३:२१ बजे : प्रकाशित
खोप निर्माणको पछिल्लो अवस्था के छ, नेपालमा कहिले आउँछ ?
डा. रवीन्द्र पाण्डे । अमेरिका र जर्मनीको संयुक्त प्रयासमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप निर्माण गरिरहेको फाइजर र बायोन्टेक कम्पनीले विश्वका ६ देशका ५३ हजार पाँच सय जनामा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रयाल गरेको थियो । यो परीक्षणमा ९० प्रतिशत सफलता हासिल गरेपछि अमेरिकी र जर्मनी बैज्ञानिक निकै उत्साहित बनेका छन् ।
अमेरिका, जर्मनी, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, साउथ अफ्रिका र टर्कीमा ४३ हजार पाँच सय जनामा ३ हप्ताको अन्तरमा यो खोपको २ डोज लगाइएको थियो । दोस्रो खोप लगाएको ७ दिनपछि कोरोना भाइरसविरुद्धको एन्टिबोडी देखिएको बिबिसीले जनाएको छ । सुरुमा खोप लगाएका ९४ जना व्यक्तिको अध्ययनबाट यो निष्कर्ष निकालिएको हो । सबै तथ्यांकको विश्लेषण बाँकी रहेकोले यो फाइनल रिपोर्ट नभएको फाइजर र बायोंटेकका अधिकारीले बताएका छन् ्र सबै रिपोर्ट अध्ययन गरेपछि खोपलाई आबश्यक परिमार्जन गरिने जानकारी दिइएको छ । कम्पनीले डिसेम्बरसम्म आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति पाउने आशा गरेको छ ।
.लेखक डा. पाण्डे
फाइजर तथा बायोन्टेकले नोभेम्बेरको तेस्रो हप्तासम्म नियामक निकायमा तथ्यांक पेश गर्नेछन । त्यहाँबाट प्रमाणित भएपछि मात्र खोपको अभियान सुरु हुन्छ । सुरुमा खोप सानो जनसंख्याको लागि बिभिन्न देशमा पठाइनेछ । त्यो खोप जेष्ठ नागरिक, दीर्घबिरामी, बालबालिका, सुत्केरी, अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीलाई दिइनेछ । ठूलो संख्यामा उत्पादन भएपछि मास भ्याक्सिनेसन गरिनेछ । .
यो खोपले कति लामो समयसम्म काम गर्छ भन्ने कुरा खोप लगाएपछि थाहा हुनेछ । यसले केहि महिना काम गर्न पनि सक्छ, एक बर्ष काम गर्न पनि सक्छ तथा लामो समय काम गर्न पनि सक्छ । यी कम्पनीले घटीमा एक बर्ष खोपले काम गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । यसको ठूलो मात्रामा उत्पादन, भण्डारण र परिवहनमा केहि कठिनाइ देखिएको छ । यो खोपलाई माइनस ८० डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
कोरोना भाइरसको अनुबांशिक कोडलाई मानव शरीरमा खोप लगाएपछि यसले हाम्रो इम्युन प्रणालीलाई तालिम दिन्छ साथै टि सेलमार्फत कोरोना भाइरससंग लड्दछ ।
यो बर्षको अन्त्यसम्ममा ५० करोड र २०२१ को अन्त्यसम्म करिब १ दशमलव ३ अर्ब डोज आपूर्ति गर्न सक्षम हुने फाइजर र बायोन्टेकले जनाएका छन् । प्रत्येक व्यक्तिलाई दुई डोज आबश्यक पर्नेछ ।
रुसको ग्यामेलिया इन्स्टिच्युट र भेक्टर इन्स्टिच्युटले तेस्रो चरणको परीक्षण गरिरहेका छन् । तेस्रो चरणको परिणाम आइनसके पनि चीन र रुसले सिमित संख्यालाई खोप दिइरहेका छन् ।
नेपालले पर्याप्त खोप पाउन अझै ५÷६ महिना लाग्ने देखिएको छ । त्यो बेलासम्म अनिबार्य रुपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अबलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
(लेखक डा. पाण्डे जनस्वास्थ्यविद् हुन् ।)
कार्तिक २५, २०७७ मंगलवार १७:३४:३० बजे : प्रकाशित